मांसाहार भोजन कति उपयुक्त ? « प्रशासन
प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७४, शुक्रबार १२:३३
मानिस शाकाहारी प्राणी हो, उसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पोषण फलफुल र तरकारीबाट नै पर्याप्त हुन्छ ।
हाम्रो पेट र आन्द्राले जति बढी रेसादार खानेकुरा पाउँछ, त्यति सजिलो पाचन कार्य गर्न सक्षम हुन्छ । मांसहार रेसाहीन खाद्य हो । मनुष्यको शारीरिक बनावट मांसाहार अनुकुल हुँदैन । यस मान्यता विपरीत यदि कोही मांसाहार सेवन गर्छ भने पेटभित्र पुगेको मांंसु आन्द्रामा गएर सड्न कुहिन थाल्दछ, जसबाट करोडौं सङ्ख्या मा प्याथोजोनिक किटाणुहरू उत्पन्न हुन्छन् । ती किटाणु क्रमशः रक्तसञ्चार प्रणालीमा प्रवेश गर्छ र रगतलाई प्रदूषितगरी उपयोगी कोषिकाहरूलाई हानि पुर्याउँदछ ।
मासुमा कोलेस्ट्रोल र कार्सिनोजिन्स जस्ता तत्वको बाहुल्यताले त्यस्ता घातक रोगलाई निम्याउँछ ।
यसबाट क्यान्सर, मुटुरोग, पक्षघात, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपनका विभिन्न कारणहरूमा प्रमुख भएकोतर्फ अनेक खोज–अनुसन्धान भइसकेकोे स्थिति छ । त्यसैले मांसाहारी व्यक्तिको रगत सधैं प्रदूषित हुन्छ । जसका कारण अर्श, हर्निया, अतिसार, एपेन्डिसाईटिस हुने तथा कतिपयमा गर्भाशय, डिम्बग्रन्थी, आमाशय, आन्द्राको क्यान्सरसमेत उत्पन्न हुन्छ ।
अर्कोतर्फ मासुको व्यापार बढाउनका लागि कुखुरा र पशुहरूलाई हानिकारक दाना तथा जथाभावी औषधि खुवाउने प्रवृतिले गर्दा समस्या झनै वढेर गएको छ ।
पशुहरूलाई काट्ने समयमा उनीहरूको मस्तिस्कमा जस्तै रिस, डर, पागलपन आदि जस्तो भावदशा हुन्छ, त्यस्तो मासु पनि जहरीलो हुन्छ त्यसैले मासुखाने मानिसमा पनि त्यस्तै भाव उत्पन्न हुन सक्छ, जुन अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ ।
मांसाहार गर्ने मानिसमा लाग्ने रोग जस्तैः प्यारालाईसिस, प्रोष्टेट, क्यान्सर, पेप्टीक, अल्सर, मधूमेह, हर्निया, पित्तासय, पत्थरी, हृदय रोग, पेटको क्यान्सर, कब्जियत, उच्च रक्तचाप, ठुला आन्द्रा तथा गर्भाशयको क्यान्सर, दम मोटोपन आदि अनेक रोगहरू लाग्दछन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको बुलेटिन सङ्ख्या ६३७ को अनूसार मासु खानाले शरीरमा लगभग १६० (विमारी) रोगहरू लाग्न सक्छन । कुनै पनि प्रकारको मासुमा कार्वोहाईड्रेस हुँदैन, यसको अमिलो कारणले गर्दा पेटमा विभिन्न किसिमको विमारी सुरू हुन्छ ।
भिटामिन “सि” (एस्कार्विक एसीड) विष अवरोधक हुन्छ, मासुमा यो भिटामिन हुँदैन त्यसैले मासु खाने मानिसहरू यो भिटामिनबाट बन्चित हुन्छन ।
रोवर्ट ग्रासले आफ्नो पूस्तक (How Healthy are Eggs) मा लेख्नु भएको छ कि अण्डाको सेतो भागमा “एविडिन” नामको विष पाइन्छ, जसले गर्दा चिलाउने, दाद, कोढ जस्ता चर्मरोगहरू निम्त्याउँछ ।
मासुमा निहीत “यूरिक एसिड” रगतमा मिसेर ह्दय रोग फोक्सोको रोगहरू, क्षयरोग, रगतको कमी, दम, अजीर्ण, अनिन्द्रा जस्ता रोगहरू उत्पन्न हुन्छन र जोर्नीहरू दूख्ने, सून्नीने, आन्द्रा क्यान्सर जस्ता रोग लाग्न सक्छ ।
मासुमा निहीत प्रोटिन फाइदा भन्दा वढी हानिकारक हुन्छ, जून किड्नीको लागि अतिहानिकारक हुन्छ ।
मासुमा सामान्यतः भिटामिन ‘ए’ हुँदैन । बनस्पति खाद्यमा केरोटिन हुन्छ जुन भिटामिन ए मा परिवर्तित हुन्छ, भिटामिनको कमीले मानिसमा आखाको रोग लाग्दछ । त्यस्तै मासुमा भिटामिन ई पनि हूदैन टूसा उम्रेको गेडागुडीमा बढी पाइन्छ । शरीर सन्तुलन राख्नको लागि यो भिटामिन हाम्रो शरीरलाई जरूरी छ ।
मांसहारी मानिसलाई अन्न नलीको क्यान्सर, एसिडिटी, हायटस, हर्निया, पित्तथैलीको पत्थरी, दाँतमा किरा लाग्ने, उदर शूल, अल्सर, मोटोपन आदि रोगहरू लाग्दछ ।
लामो आयु राम्रो स्वस्थ जीवन र आनन्दपूर्वक जीवन ज्युनका लागि शाकाहारको साथै प्राकृतिक जीवनशैली सर्बश्रेष्ठ हुन्छ । मांसाहार मानिसलाई मानिस बनिरहन सबै बाधक नै देखिन्छ । त्यसैले मासु खान छोडौं, स्वस्थ र आनन्दपूर्वक जीवन जिऔं ।
सर्बोत्कृष्ट आहार साकाहार
मानिसको मांसाहारी नभइ ऊ त प्राकृतिक रूपले शाकाहारी प्राणी हो, किनकि उसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पोषण फलफुल र तरकारीबाट नै पर्याप्त हुन्छ । उसलाइ मासु, माछा तथा दुधवाट निर्मित कुनै खानेकुरा आवश्यक हुँदैन । त्यसमा पनि बुद्धि र विवेकले युक्त सर्बोत्कृष्ट प्राणी हो । त्यसको दुरूपयोग भयो भने हिंसा, प्रतिहिंसा, बर्बरता कस्तो हुने होला ? अप्राकृतिक आहार–विहारले रोगव्याधी नबढे के चाहिं बढ्ला ? बीसौं शताब्दिका सबैभन्दा प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलबर्ट आइस्टाइनले भनेका छन् कि विश्व ब्रम्हाण्ड बचेको हेर्न चाहने हो भने मानिस शाकाहारीमा रूपान्तरित हुनैपर्छ ।
यस भनाइमा केवल आहारको कुरा छैन बरू आहारबाट मानिसमा तरङ्गित र उब्जने भाव, विचार र कर्ममा पनि उनले सङ्केत गरिरहेका छन् । त्यसलाई हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं जस्तो लाग्छ । मानिसको आहारअनुसार विचार र चिन्तन बन्छ । साकाहारी भोजनलाई इश्वरको प्रसाद मानेर बंँडीचुँडी खान सकिएमा त्यही भोजन सात्विक आहारमा रूपान्तरण हुने छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका क्यान्सर रिसर्च सेन्टरको इपिडिमियोलोजी युनिटमा आवद्ध डाक्टर टिमकाई एवम् सहयोगीहरूले ६१ हजार व्यक्तिमाथि १२ वर्षको लामो अवधिसम्म सोधकार्य गरे । उक्त महत्वपूर्ण शोधको नतिजा अनुसार जुन व्यक्ति शाकाहारी हो, उसलाई मांशाहारीको तुलनामा रगत सम्बन्धी रोग ल्यूकेमिया हुने आशङ्का ४५ प्रतिशत कम हुन्छ भने क्यान्सरको डर ५२ प्रतिशत कम हुन्छ ।
२८ आश्विन २०७६, मंगलवार ११:००
काठमाडौं । बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका सभामुख कृष्णबहादुर महराको डीएनए
२८ आश्विन २०७६, मंगलवार ०७:२५
कसले बुझ्ने स्वास्थ्यकर्मीका पीडा ? सेवा गर्नुपर्ने हात मन्त्रालयमा सुर्ती मोल्दै ! (फोटो फिचर)
काठमाडौँ । स्वास्थ्यकर्मीको काम हो बिरामीलाई सेवा गर्ने तर यति
२७ आश्विन २०७६, सोमबार १८:३०
काठमाडौँ । मोफसललाई नेपाल नै नठान्ने काठमाडौँको पुरानै रोग हो
२७ आश्विन २०७६, सोमबार ०७:२२
डा. केसी उमेर हदका कारण सरकारी सेवाबाट अवकाश पाउँदै
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी उमेर हदका कारण सरकारी सेवाबाट